बाहिरियो नवराज बिकसहित ५ जनाको ज्यान जानुको रहस्य, यस्तो आयो स्थलगत प्रतिवेदन — Sanchar Kendra
१ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
२सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
३मकवानपुरमा थप १ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पर्सामा पनि बढ्दै
४सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
५रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
६विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
७ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
८तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
९प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
१०प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ
११ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
१२गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
बाहिरियो नवराज बिकसहित ५ जनाको ज्यान जानुको रहस्य, यस्तो आयो स्थलगत प्रतिवेदन
काठमाडाैं । २०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँकी ती किशोरीले नवराज विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरिन् । आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन् । नवराजले १९ जना साथीहरूलाई साताअघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग मागेका थिए । तर पछिल्लो म्यासेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य भएन । भीमबहादुर सिंह र कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
ओलीको सत्ता संकटमा, खनाल-नेपाल पक्षका सबै सांसदले राजीनामा दिने
एकताको ढोका बन्द गरे राजिनामा गर्ने नेपाल पक्षको तयारी, ओलीको हालत के हुन्छ ?
नेपाल बाहिरिएपछि जब शीतल निवासमा ओली पुगे, त्यसपछि जे भयो…
कसको नेतृत्वमा बन्ला नयाँ सरकार ?
काठमाडौंमा घट्यो सबैलाई रूवाउने यस्तो मार्मिक घटना, बिहे गरेलगत्तै दुलहीले छोडिन संसार, यस्तो छ कारण